Warar - Kooxda Sercel Iyo Tronic Oo U Diyaar Garoobay Geophones Ku saleysan MEMS
Kooxda Sercel Iyo Tronic Oo Loogu Talo Galay Geophones Ku-saleysan MEMS
Sercel iyo 'TRONIC'S Microsystems', waxay iska kaashadeen soo saarista jiil cusub oo dareemayaal dhul gariir ah, ama geophones, oo ku saleysan MEMS. Naqshadeeyay CEA Leti, xawaaraha 0.1µg ee xawliga lagu duubay meel madhan ayaa lagu hagaajiyay oo lagu farsameeyay TRONIC'S Microsystems.
Geophones wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah wax soo saarka muhiimka ah ee Sercel (F), hogaamiyaha adduunka ee aaladaha dhul gariirka ee sahaminta saliida iyo gaaska. Dareemayaal aad u xasaasi ah, aaladaha geophones waxay cabiraan milicsiga hirarka austustic, ee lagu diro dusha sare ee aagga, lakabyada joqraafiyada kala duwan (eeg sawirka 1). Xogta ayaa markaa loo isticmaalaa in lagu sawiro khariidadaha sahaminta cilmiga dhulka oo tilmaamaya goobta iyo cabirka kaydka saliidda iyo gaaska.
Geophones, in kasta oo ay yihiin qaybo elektromagnetic-raqiis ah (fiiri sawirka 2), waxay ahaayeen kuwo culus oo culeys badan maadaama ay u baahan yihiin inay ku xirmaan fiilooyinka qeybta wax soo saarka dhexe. Sahaminta saliidda casriga ahi hadda waxay u baahan tahay waligeed fududeyn, xalal badan oo guur guura oo awood u leh saxnaan aad u sarreeya.
MEMS geophone ku saleysan
Sercel wuxuu qaatay dhowr sano oo la shaqeynayay CEA Leti (F), si loo muujiyo suurtagalnimada iyo naqshadeynta joornaalka MEMS ku saleysan. Wadashaqeyntu waxay dhalisay nooc ka mid ah xawaare aad u yar oo fudud oo geophone ku dhisan (eeg sawirka 2 iyo jadwalka 1).
Nooca noocyadu wuxuu gaadhay waxqabadyadii xad-dhaafka ahaa ee loo baahnaa: xallinta illaa 0.1µg, in ka yar milyan milyan oo culeyska dhulka, kana badan +/- 100mg.
Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee la dejiyay u guurista xalka ku saleysan MEMS shaybaarka illaa khadka wax soo saarka. MEMS dhab ahaantii ma soo bandhigaan nidaamyo been abuur ah oo caadi ah waxayna leeyihiin baahiyo aad u baahan oo baakad ah iyo habab tijaabooyin gaar ah oo adag. Sidaa darteed Sercel wuxuu ubaahanyahay soo saare MEMS caado ah oo u badali kara fikradeeda MEMS alaab warshad lagu kalsoon yahay.
Khibrad u leh warshadaynta iyo soosaarida caadooyinka MEMS accelerometers, TRONIC'S Microsystems (F) sidoo kale waxay barteen dhismooyinka teknolojiyadda geophone ee Sercel.
Qaab-dhismeedka heerka sare ee shirkadda soo saarista shirkadda MEMS ayaa sidoo kale si gaar ah ugu habboonaa baahiyaha wax soo saar ee Sercel. Sidaa darteed labada shirkadood waxay galeen iskaashi ganacsi
Laga bilaabo noocyada, Tronic wuxuu hagaajiyay qalabka oo wuxuu uqalmayaa nidaamkiisa gaarka ah iyo farsamada baakadka faaruqinta. Soo saaraha Faransiiska ayaa markaa hubiyay keenista taxanaha koowaad horaantii 2003 maantana wuxuu soo bandhigayaa baakado iyo tijaabooyin qaybo geophone ah (fiiri sawirka 3) ee Sercel uu ku dhex jiro nidaamyo dijitaal ah oo cusub.
Xidhmada Vacuum ee MEMS
Si loo yareeyo buuqa molecular-ka ee dhismaha isla markaana loo gaadho heerarka waxqabadka ee loo baahan yahay, TRONIC'S waxay soo koobeysaa qalabka 'silicon microstructure' oo ka hooseeya jawi faaruq ah oo aad u sarreeya oo ku jira baakadda LCC Baakadani waxay u oggolaaneysaa geophone-ka MEMS inuu ka badan yahay qodobka Q ee ka badan 10.000 (qiyaas ahaan faaruqin u dhexeysa 1mTorr).
Yar yar oo fudud, firaaqada baakadeysan ee MEMS geophone xitaa waxay ka sarreysaa qaar ka mid ah qeexitaannada muhiimka ah ee geophones-dhaqameedka (eeg jadwalka 1).
Intaa waxaa dheer, 3 MEMS geophones ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa meel aad u yar iyada oo elektirooniggeeda dijitaalka ah laga takhalusi doono qaar ka mid ah fiilooyinkii horey loogu baahnaa. Geophone-ka cusub ee MEMS-ku-saleysan ayaa sidaas u fududeynaya macquulka ah macaamiisha Sercel iyadoo u oggolaaneysa cabirka 3 qaybood oo leh firfircooni sare.
Wadashaqeyntan, 'TRONIC'S Microsystems' waxay sii xaqiijisay awooda ay u leedahay inay u badasho fikradaha MEMS-ka caado u ah alaab waxqabad sare oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay codsiyada dusha laga saarayo